चिया आफ्नो जीवन: तपाईं ग्राहकहरु जान्नु आवश्यक के?
चिया - पेय दुनिया भर लोकप्रिय ताजा। यो एक राम्रो रंग र स्वाद यो सम्भव भएको मुड हल्का बनाउँछ कि छ। तर प्रश्न तिनीहरूले चिया को एक शैल्फ जीवन छ भने पर्याप्त छ कि लोकप्रिय छ। उत्पादन पनि भण्डारण समय जो समयमा यो प्रयोग गर्न सकिन्छ छ।
चिया सहित सबै उत्पादनहरु, एक छ आफ्नो जीवन। अन सामान को प्याकेजहरू विभिन्न निर्माताहरु, यस जानकारी विभिन्न तरिकामा संकेत हुन सक्छ। एक मा "चिया तखता जीवन" लिखित हुन सक्छ र अन्य मा - "सर्वश्रेष्ठ अघि।" "तखता जीवन",
पहिलो किनभने यो स्वास्थ्य को लागि हानिकारक हुन सक्छ सूचित मिति पछि यो पेय पिउन सक्दैन भन्ने हो। दोस्रो अवधारणा तोकिएको समय भित्र, उत्पादन यसको गुण राख्छ, तर अवधारणा नीति विषय भनेर implies। तेस्रो अवधारणा विश्वव्यापी हुन मानिन्छ। चिया दिइएको, यी सर्तहरू यो डिजाइन मिति सम्म आफ्नो गुण कायम रहन्छ मतलब।
एक मानिस एक पेय फिट दिन र राम्रो मुड मा भेला गरिएको छ कसरी राम्रो निर्भर गर्ने क्षमता। पनि यो प्याकेजिङ्ग, भण्डारण र मदिरा असर गर्छ। एक उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कारक मानिन्छ चिया क्रमबद्ध, त्यसैले आफ्नो जीवन को हरेक प्रकारको फरक हुन सक्छ।
त्यहाँ चिया को विभिन्न प्रकार हो पसलहरूमा दायरा:
को बैग अक्सर फल वा स्वादिष्ट को टुक्रा थपिएका छन्। चिया को आधार चिया रूख पात र जडीबुटी सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। यसको रंग ओक्सीकरण को डिग्री, यो प्रक्रिया को लागि निर्धारण गरिन्छ।
सेतो, पहेंलो, हरियो
चिया पात अलिकति भुना, वा बाफ संग व्यवहार हो। यस कारण, त्यहाँ एक उत्कृष्ट स्वाद र सुगन्ध छ। यो विकल्प तपाईंलाई उपयोगी पकाउने गुण राख्न अनुमति दिन्छ।
हरियो चिया को आफ्नो जीवन, र सेतो र पहेँलो, एक वर्ष भन्दा बढी। एक उत्पादन खरिद गर्दा तपाईं संग्रह र उत्पादन को ठाउँमा ध्यान गर्न आवश्यक छ। यी क्षेत्रमा नै हो भने, त्यसपछि तपाईं सुरक्षित यस्तो सामान खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो जीवन को प्याकेजिङ्ग मा त के संकेत छ साँच्चै छ।
रातो, नीलो, कालो
चिया यी प्रकार धेरै स्वादिष्ट र स्वस्थ छ। आफ्नो फसल लगभग गर्मी उपचार को कुनै प्रकारको छ। पातहरु सूर्य वा छाया मा सुकेको र हवादार छन्।
कारण चिया आफ्नो जीवन को पात को ओक्सीकरण2वर्ष छ। मात्र यो ती अवस्थाहरूमा जहाँ यसको खेति नै क्षेत्र मा पैक लागू हुन्छ। त्यसपछि सम्पूर्ण भण्डारण अवधिमा संतृप्त गरिनेछ पी।
तपाईं समाप्त पेय छुन भने, त्यसपछि यो 30 मिनेट भित्र खपत गर्नुपर्छ। र एक दिन भन्दा कुनै थप फ्रिज मा छोड्नुहोस्। पातहरु किन दीर्घकालीन भण्डारण contraindicated छ जो छ, नकारात्मक घटक गठन पीसा।
हरियो चिया वरिपरि3पटक वेल्डिंग लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, स्वाद न त उपयोगी गुण न छैन नष्ट हुनेछन्। चिया आधार कुनै 12 घण्टा भन्दा बढी लागि फ्रिज मा भण्डारण गर्न सकिँदैन।
चिया प्रयोग बैग को निर्माण मा धेरै गुणवत्ता कच्चा माल छैन। सामान्यतया यो पात चिया उत्पादन देखि remnants छ। स्वाद र रंग सुधार गर्न, यसलाई flavorings र फल टुक्राहरू मिश्रित छ।
प्लस एक गढ र पेय को तीव्र तयारी छलफल। तर झोला धेरै ठूलो पात मार्फत भने, उत्पादन उच्च गुणस्तर को हुन मानिन्छ। छैन6भन्दा बढी महिना - चिया यस प्रकारको तखता जीवन।
म उल्लेखनीय वेल्डिंग को पेय पिउन सक्नुहुन्छ?
म्याद समाप्त चिया अघिल्लो सुगन्ध र स्वाद छ। साथै, पात को परिवर्तन छ, र समय तिनीहरूले धूलो बन्न सक्छ। बाँकी वेल्डिंग प्रयोगको विषाक्तता को एक संभावना छ देखि आवश्यक छैन। स्वास्थ्य Jeopardize आवश्यक छैन, यो एउटा नयाँ चिया किन्न राम्रो छ।
उत्पादन गुणस्तर कसरी निर्धारण गर्ने?
एक चिया छान्ने जब प्याकेजिङ्ग मा हेर्न। यसलाई पूरा हुनुपर्छ। त्यो खरिदकर्ताहरूको लागि सबै आवश्यक जानकारी संकेत गर्नुभयो। यो पाना पेय प्राप्त गर्न मनमोहक छ। यो बैग वा डिब्बे मा प्याकेज गर्न सकिन्छ। फिल्म उपस्थिति कि उत्पादन एक्स्ट्रानिअस स्वाद छैन आउँछन् सुझाव।
तपाईं चिया पात नै आकार र पनि रंग हो भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्याकेजहरू चिया धूलो हुनु हुँदैन, twigs। प्याकेज खोल्ने पछि त्यहाँ एउटा तीव्र सुगन्ध छ। कुनै विदेशी odors हुनुपर्छ। उच्च गुणस्तरीय उत्पादन कम लागत हुन सक्छ।
चिया आफ्नो जीवन हुनु हुँदैन2भन्दा बढी वर्ष, तर यो एक वर्ष भित्र उत्पादन प्रयोग गर्न राम्रो छ। यो भण्डारण नियम पालन गर्न मात्र महत्त्वपूर्ण छ:
चिया एक Sealable कचौरा मा राखिएको हुनुपर्छ;
यसलाई हल्का उजागर गर्न हुँदैन, यो चिस्यान को प्रभाव समाप्त गर्न आवश्यक छ;
कारण विदेशी odors गर्न उत्पादन को स्वाद राख्ने सक्दैन।
घरमा राम्ररी भण्डारण भने सधैं स्वादिष्ट र खुशबूदार पेय हुनेछ। यो तपाईं ऊर्जा, शक्ति र राम्रो मुड प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। उत्पादन गुणस्तर पूरा गर्दैन भने, त्यसपछि यसलाई आवश्यक पसलमा यसलाई फिर्ता र साँच्चै उच्च गुणस्तरीय चिया किन्न छ।
चिया "Lipton": प्रजातिहरू, स्वाद। ग्राहक समीक्षा
"Burnley" (चिया): निर्माता र समीक्षा
पहिलो व्यक्ति मा कम्प्यूटर खेल। सबै भन्दा राम्रो खेल को समीक्षा
आधुनिक डिजाइनमा पर्खालहरु मा सजावटी नरम प्यानल। पर्खाल सजावटी प्यानल
स्लोभाकिया र यसको अन्य आकर्षण मा सबै भन्दा प्रसिद्ध शहर। स्लोवाकिया: समीक्षा
इको हृदय - हृदय रोग निदान गर्न मात्र तरिका
वायु भान्सा - रेस्टुरेन्ट, राम्रो खाना पकाउने को रहस्य जो
Calvin को विजेता: calvin क्लाइन अनन्तकाल खुशबू को विवरण।